I-Laptop ye-Surface yeMicrosoft inbuilt Windows 10 Iinkcukacha | IYO
3 UCanzibe 2017
I-Laptop ye-Microsoft kwi-laptop yenziwe kwiWindows 10 S: Iinkcukacha, ixabiso kunye neempawu
I-Microsoft Surface Laptop ulapha, kwaye lo ugijima Windows 10 S. Microsoft bhengeze i-Laptop entsha ye-Surface nge-Windows 10 S kwi-Microsoft yayo yeZiko leMfundo kwiNew York izolo, kwaye imveliso yakhelwe ukuba inselele umgangatho ongafanelanga Google Chromebooks kwaye MacBooks ye-Apple kwinxalenye yokufundisa e-US.
I-Laptop Laptop nangona kunjalo nje ngumbandela wecala, kwaye njenge-Vice President we-Microsoft ye-Surface Computing Panos Panay yenze icace ngexesha lokusungulwa, esi sixhobo sithatha i-Apple MacBooks. IMicrosoft ithi i-Laptop Laptop iluncinci kwaye ilula ngaphezu kwanoma yiyiphi i-MacBook kwimarike, kwaye ikhuphe ngaphezu kweMacBook Air yangoku.
Okwangoku i-Laptop ye-Surface iqhubela phambili iqhuba iWindows 10 S, egcina ikhuphe ngokukhawuleza kuneyona standard Windows 10, kwaye iyakwazi ukuqhuba izicelo kuphela kwi-Windows Store. Nge-Windows 1O S unokwazi ukuqhuba ii-Microsoft eziqinisekisileyo. Kwimeko apho kufuneka usebenze into evela ngaphandle kwevenkile, uya kufuneka uqhubele kwi-Windows 10 Pro kwaye umbutho uya kunika abathengi ukhetho. Nceda uqaphele, u-Windows 10 Pro uphawuleza ude ngoDisemba 31, 2017. I-Laptop Laptop ihamba ngokuhamba kunye nomnyaka omnye we-Ofisi ye-Office 365 yamahhala.
Ngoku ka Microsoft, iziqinisekiso zesicelo "Ukhuseleko nokuqinisekiswa kukaMicrosoft." Oku kwongezela ukuba awukwazi ukukhuphela nokufaka i-Chrome okanye i-Firefox kula ma-laptops, kwaye iMicrosoft Edge yinkqubo engagqibekanga.
I-Windows 10 S idibene nenkqubo yokugcinwa kwe-organization distribution, leyo yi-OneDrive ngaloo ndlela nganye iirekhodi zakho ziya kusinda efwini kwaye zivule kwiidivaysi ezahlukeneyo.
Ngoko ke zeziphi iinkcukacha ze IPhone Laptop? Iyiphi indleko yokuqala kwezi zixhobo?
I-Microsoft Surface Laptop Uya kuqala kwi-$ 999 kwaye ukhuphuke umgama ukuya kwi-2199 ye-$ kuxhomekeke kwimihlobo ye-setups oyifunayo kule fowuni.
Ifomu le-Intel Core i5 kunye ne-128GB SSD yokugcinwa kunye ne-4GB RAM kunye ne-Intel HD Graphics 620 iya kubiza i-$ 999. Lo mzekelo oyintloko uya kuza nje kwi-Platinum ye-shading, ngokweSayithi yeMicrosoft. I-Intel Core i5 kunye ne-256GB SSD kunye ne-8GB I-RAM kunye ne-Intel HD Graphics 620 iya kubiza i-$ 1299 kwaye iya kuza nganye yezinye iindlela ezine ze-shading eziBurgundy, Platinum, Cobalt Blue, iGraphite Gold.
IPhone Laptop Ngokufanayo isebenzisa iWindows 10 S, egcina ihamba ngokukhawuleza ukuba ixhomeke kune-Windows 10 yesiqhelo, kwaye iyakwazi ukuqhuba izicelo ezisuka kwiWindows Store.
Intel Core i7 kwintsimi ye Intel Iris 640 iqala kwi $ 1599 kwi256GB SSD + 8GB i-RAM. Lo ufika nje kwiPlatinum ye-shading kunye neendleko ze-1,599. I-16GB RAM + 512GB SSD ukuguqulelwa, efumaneka ngokufanayo kwi-Platinum ye-shading iya kubiza i-$ 2,199.
Okwangoku i-Laptop iPhone ikhonkco ye-13.5-intshi yePixelSense Display, kunye nokuzimisela kwePixel 2256 x XUMUMX, esebenza kwi-1504 PPI. Umboniso ukhuthaza i-201 iphuzu le-multi-touch, kwaye ine-10: I-3 kunye ne-Surface Pen iya kuphuma apha nakhona.
Intel Core intsimi ye-I7 ne-Intel Iris ukumelwa kuqala kwi-$ 1599 kwi-256GB SSD + 8GB i-RAM.
Imilinganiselo yale Laptop ye-Surface i-308.1 mm x 223.27 mm x 14.48 mm, kwaye ilinganisa i-1.252 gram. I-USB 3.0 port, i-headset jack, i-Mini DisplayPort, iPorts Connect, kwaye ilungile kunye ne-Surface Dial kunye ne-Surface Dock nayo. UMicrosoft uthembisa ii-14.5 iiyure zokuhlala kwebhetri kunye ne-laptop.
The IPhone Laptop ihamba nekhamera ye-Windows Hello face in-in, ikhamera ye-720p HD (ubuso obuphambili)
microphone stereo. Iineentetho ze-Omnisonic ne-Dolby Audio Premium. Kwi-WiFi ngaphambili, ine-network ye-wireless ye-802.11ac ye-Wi-Fi; IEEE 802.11a / b / g / n efanelekileyo kwaye yongeza i-Bluetooth 4.0 LE.
The laptops ziphakanyisiwe ngaphambi kokulungiswa e-US ngoku, kwaye ziya kuqala ukuthunyelwa ukusuka ngoJuni 15, 2017.
Isinyathelo esilandelayo kwi-CarePoint Career: Ulawulo noPhuhliso